ထွင်းဖောက်မြင်နေရတဲ့ ကိုယ်လုံးအလှတရားနဲ့ ပုရိသတွေ အသည်းတယားယား ဖြစ်သွားအောင် ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ ရွှေပိုးအိမ် – Online News Post
ထွင်းဖောက်မြင်နေရတဲ့ ကိုယ်လုံးအလှတရားနဲ့ ပုရိသတွေ အသည်းတယားယား ဖြစ်သွားအောင် ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
By Cele PTPosted on July 19, 2021
မင်းသမီး ချောလေး ရွှေပိုးအိမ် ကတော့ အနု ပညာ လောက မှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်း မှာ အကောင်းဆုံး နဲ့ အပီပြင် ဆုံး သရုပ်ဆောင် လျက်ရှိ နေခဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ အောင်မြင်လျက် ရှိနေ တဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါ အဝင် ဖြစ်တဲ့ သူမက တော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေမှာ လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်လျက် ရှိ နေခဲ့ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် လျက် ရှိနေခဲ့ တာပဲဖြစ် ပါ တယ်..။
ကြော်ငြာတွေ ကို လည်း ရိုက်ကူး လျက် ရှိနေပြီး ပရဟိတ အလုပ်တွေ ကို လည်း လုပ်ကိုင် လျက် ရှိနေ တဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ ချစ် အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် တင်ပေး လေ့ရှိ တဲ့ သူမ က တော့ သွယ်လျ လှပတဲ့ ကိုယ်လုံး လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထား သူလေးပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။
သူမ ကတော့ ယခုမှာ အသားကပ် ဝတ်စုံလေး ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိ လွန်း တဲ့ သူမ ရဲ့ကိုယ်လုံး အလှလေး ကို အထင်းသား မြင်နေ ရပြီး အသည်းယား စရာ ကောင်းလွန်းနေ ခဲ့ ပါ တယ်..။ သူမ ရဲ့ ကြွေလောက်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ ဟာ မြင်ရသူပရိသတ်တွေ ကို အချစ်ပိုစေ ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါတယ်..။ ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် မင်းသမီး ချောလေး ရွှေပိုးအိမ် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရပါ တယ်…။
Source : Shwe Poe Eain Facebook Account
မင္းသမီး ေခ်ာေလး ေရႊပိုးအိမ္ ကေတာ့ အႏု ပညာ ေလာက မွာ နာမည္ တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ တဲ့ ဇာတ္ကားတိုင္း မွာ အေကာင္းဆုံး နဲ႔ အပီျပင္ ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိ ေနခဲ့သူ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိေန တဲ့ အႏုပညာ ရွင္ေတြ ထဲမွာ တစ္ေယာက္ အပါ အဝင္ ျဖစ္တဲ့ သူမက ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ေတြမွာ လည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိ ေနခဲ့ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ လ်က္ ရွိေနခဲ့ တာပဲျဖစ္ ပါ တယ္..။
ေၾကာ္ျငာေတြ ကို လည္း ရိုက္ကူး လ်က္ ရွိေနၿပီး ပရဟိတ အလုပ္ေတြ ကို လည္း လုပ္ကိုင္ လ်က္ ရွိေန တဲ့ သူမ ကေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္အမာ ရယူ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ ခ်စ္ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အျပဳံးေလး ေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာထက္ တင္ေပး ေလ့ရွိ တဲ့ သူမ က ေတာ့ သြယ္လ် လွပတဲ့ ကိုယ္လုံး ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထား သူေလးပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။
သူမ ကေတာ့ ယခုမွာ အသားကပ္ ဝတ္စုံေလး ေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိ လြန္း တဲ့ သူမ ရဲ့ကိုယ္လုံး အလွေလး ကို အထင္းသား ျမင္ေန ရၿပီး အသည္းယား စရာ ေကာင္းလြန္းေန ခဲ့ ပါ တယ္..။ သူမ ရဲ့ ေႂကြေလာက္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ဟာ ျမင္ရသူပရိသတ္ေတြ ကို အခ်စ္ပိုေစ ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္..။ ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ေရႊပိုးအိမ္ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပးလိုက္ ရပါ တယ္…။
Previous post ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ထိန်းချုပ်မရတော့အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိရက်လွန်းနေတဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေးတွေ
Next post သူမရဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ အလန်းစားကိုယ်လုံးလေးကို လှစ်ဟပြသလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
အမျိုးသားထုကြီး ရဲ့ နှလုံးစိုင်ခဲကြီး ကြွေကျသွားလောက်အောင် ညို့အားပြင်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ပိုစ့်ပေးထားတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
တင်းကိတ်လှတဲ့ ရွှေရင်ဖွေးဖွေးလေးကို အထင်းသား မြင်သာအောင် ချပြလိုက်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
အခါခါပြန်ကြည့်ရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှရက်လွန်းနေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ အသည်းယားဖွယ် ပုံလေးတွေ
ဘစ်ကီနီလေးနဲ့ သူမရဲ့ သဘာဝအလှအပတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့ အချိုးအစားကျကျ လှပကာ မိလွန်းနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ
Copyright © 2021. Created by Online News Post. Power by Cele News